पर्वतमा पनि फुट्यो नेकपा : दुई समूहका छुट्टा–छुट्टै भेला, को कता लागे ? – Parbat News
१९ पुस, पर्वत । झण्डै ३ बर्ष अघि दुई पार्टी एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रमा विभाजीत भएसंगै पर्वत जिल्लामा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ । पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशभर बेग्ला बेग्लै भेलाहरु गरीरहेका छन् । दाहालसंग नेकपाका अर्का नेता माधव नेपाल पनि सहभागी छन् । केन्द्रमा देखिएको फुटको संकत पर्वत जिल्लामा पनि देखिएको हो ।
दुवै पक्षले आफूलाई संस्थापन भन्दै अलग अलग स्थानमा भेला गरीरहेका छन् । साविक एमालेको पार्टी कार्यालयलाई नेकपाको पार्टी कार्यालयको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो तर दुवै समूहले पार्टी कार्यालयमा नभई अन्य स्थानहरुमा भेला तथा वैठकहरु गरीरहेका छन् । नेकपा भित्रको आन्तरीक समस्या पार्टी कार्यालयमा ब्यक्त नगर्ने भन्दै दु्वै समूहले अलग अलग स्थानमा वैठक र भेला गरेका हुन् ।
जिल्ला कमिटिमा र कतिपय कमिटिहरुको संख्यामा ओली समूह कमजोर रहे पनि जिल्लामा रहेका पूर्व एमालेका अगुवा नेताहरु भने ओली समूहमा देखिएका छन् । जिल्ला अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद पदम गिरी, प्रदेश सरकारका मन्त्री विकास लम्सालले ओली समूहको नेतृत्व गरीरहेका छन् । श्रोतका अनुसार पूर्व एमालेले जितेका ३७ वटा वडाहरु मध्ये दुई तिहाई वडाअध्यक्षहरु ओली समूहमा रहेको बताईन्छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर वि. पौडेल देखि बहुमत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि ओली समूहमा खुलेर लागेका छन् ।
उता, प्रचण्ड र माधव समूहमा भने पूर्व माओवादी धारका सवै नेता खुलेका छन् । पूर्व एमाले तर्फका पुराना नेताहरु मोती पौडेल, गणेश पौडेल र एमालेका पूर्व सचिव पदमपाणी शर्मा देखिएका छन् । प्रचण्ड र माधव समूहमा लागेका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरुले भने सूर्य चिन्हको प्रतिक्षा गरेको बताउँछन् । पूर्व माओवादी धारसंग मिसिएका पूर्व एमालेका नेताहरुले केन्द्रको समिकरणका कारण जिल्लामा पनि समिकरण गरिएको बताउँदै आएका छन् ।
जनवर्गिय संगठनहरुमा भने जिल्लामा ओली समूहको बर्चश्व देखिएको छ । युवा संघ, अखिल नेपाल महिला संघ, प्रेस संगठन लगाएतका जनवर्गिय संगठनहरुमा भने ओली समूहको पकड छ । अनेरास्वीयूको नेतृत्व भने प्रचण्ड समूहको देखिएको छ । ओली समूहले पालिका स्तरीय भेला, प्रशिक्षण र वैठकहरुको आयोजना गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिएको छ । उता, प्रचण्ड समूह पनि संग संगै स्थानीय तहहरुको भेलाहरुमा जुटेको छ । टुट र फुटको राजनीतिले जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टी कमजोर हुने कार्यकर्ताहरुले बताउँदै आए पनि पर्वतमा पनि केन्द्रको विभाजनको पूर्ण संकेत देखिएको हो ।
पछिल्लो संसदीय दलको निर्वाचनमा २ प्रदेश र एक संघीय निर्वाचन तत्कालीन बाम गठबन्धले जितेको थियो । उता, स्थानीय तहमा भने साविका एमाले एक्लैले ७ वटा पालिका मध्ये ४ स्थानीय तह र ६१ वडा मध्ये ३७ वटा वडाहरुमा विजयी हासिल गरेको थियो । साविक माओवादीले भने स्थानीय तहमा ४ वडाहरुमा मात्र जित हासिल गरेको थियो ।
दुई पार्टीको एकिकरण हुँदा सवै स्थानीय तहहरुमा जित सुरक्षित देखिए पनि पार्टीमा आएको फुटले भने कम्युनिष्ट पार्टीको भविश्य कस्तो हुन्छ आगामी निर्वाचनले मात्र देखिने भएको छ । आजको अर्थ वीट साप्ताहिकमा खबर छ